कोरोनाबिरुद्धको खोपमा नेपालको भारतसँगै अन्तिम भरोसा, कहिले बन्छ र कति मुल्य ? – ABC NEWS 24
कोरोनाबिरुद्धको खोपमा नेपालको भारतसँगै अन्तिम भरोसा, कहिले बन्छ र कति मुल्य ?
काठमाडौं । नेपालले भारतमा बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) खोपलाई लिएर विशेष चासो लिएको छ । भारतमा खोप परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, खोपको उत्पादन पनि द्रुत गतिमा भइरहेको छ । भारत सरकारले भनेको छ कि एक महिनामा खोप सुरु हुन सक्छ ।
अर्कोतर्फ, नेपालले पनि यसको खोप आवश्यकताहरू पूरा गर्न पहल सुरु गरेको छ । नेपालले भारतमा बनेको खोप लिन चासो देखाएको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले बीबीसीलाई भने कि उनले भारतमा खोप निर्माणकर्ता र दिल्लीका सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् । पश्चिमी देशहरूमा खोप लागू भएदेखि नेपालमा खोप कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा कडा छलफल भइरहेको छ ।
राजदूत आचार्यले भारतका खोप निर्माता अभिताभ कांत, सेरम संस्थानका वरिष्ठ अधिकारी र एनआईटीआई भारतका प्रमुख भारतसँग कुराकानी गरेका हुन् । सेरम संस्थानले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, युकेले एस्ट्राजेनेका कम्पनीको सहयोगमा विकसित गरेको एउटा खोप उत्पादन गर्दैछ । जानकारी अनुसार यो खोप ७० देखि ९० प्रतिशत प्रभावकारी रहेको बताइएको छ ।
आचार्यले भने, ‘सीरम संस्थानको क्षमता धेरै ठूलो छ । यसले नेपालको आवश्यकता पनि पूरा गर्न सक्छ । यस सम्बन्धमा हामी सीरम संस्थानसँग कुरा गरिरहेका छौं । उसको साथ कुराकानी अपेक्षित थियो ।’ गत महिना नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रीङ्गलाले नेपालको खोप आवश्यकता भारतको लागि प्राथमिकता रहेको बताएका थिए ।
आचार्यका अनुसार अभिताभ कान्तले खोपमा नेपाललाई प्राथमिकता दिनेबारे पनि उल्लेख गरेका छन् । आचार्यका अनुसार नेपालले सुरुमा २० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिन प्रयास गर्नेछ । यो दुई चरणमा गरिनेछ, पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत र दोस्रो चरणमा १७ प्रतिशत मानिसहरूलाई खोप दिइनेछ । उनका अनुसार, ‘यसको मतलब करिब ६० लाख, अर्थात एक करोड २० लाख खोप चाहिन्छ ।
हामी आशा गर्दछौं कि हाम्रा प्रारम्भिक आवश्यकताहरू भारतबाट पूरा गर्न सकिन्छ । यो सबै एकैचोटि देखा पर्दैन, एक पटक उत्पादन सुरु भएपछि अवस्था स्पष्ट हुनेछ ।’ विज्ञहरू भन्छन कि भारत वा छिमेकी मुलुकमा बनाइएका खोपहरू नेपालका लागि धेरै कारणले लाभदायक हुन सक्दछन् ।
विशेष गरी भारतमा बनाइएका खोपहरू नेपाललाई सस्तो र आपूर्ति गर्न सजिलो पर्नेछ । डाक्टर समीरमणि दीक्षितका अनुसार नेपाल खोपको लागि धेरै टाढा जानु हुँदैन । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी–एस्ट्राजेनेका खोप भारतको सीरम संस्थानमा निर्माण भइरहेको छ ।
दुबै डोजको लागत करिब २४०० रुपैयाँ पर्दछ । उनले भने कि खोप सस्तो छ र यसलाई साधारण चिसो चेनहरू प्रयोग गरेर सुरक्षित राख्न सकिन्छ । दीक्षितका अनुसार चीनमा बनाइएका खोपहरू पनि नेपालका लागि लाभदायक हुन सक्छन् । BBC
← breaking news रवि लामिछानेलाई सामाजिक सञ्जालमा बधाई ओ’इरो !
दु:खद खबर बस दुर्घ’टना हुँदा एकको मृ’त्यु, आठ घा’इते →